Ny fizahantany ao Bogotá dia maneho ny 29.1% amin'ny hetsiky ny fizahan-tany any Kolombia
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny fizahantany ao Bogotá dia maneho ny 29.1% amin'ny hetsiky ny fizahan-tany any Kolombia
Novambra 29, 2017
Bogotá dia mitaky ny ampahefatry ny fizahan-tany any Kolombia
Ny GDP fizahan-tany any Bogotá dia mitentina 2.5% amin'ny harinkarenan'ilay tanàna, mitentina 1.8 tapitrisa dolara amerikana, dia nanambara tatitra vaovao nataon'ny World Travel & Tourism Council (WTTC), Amerika Latina City Travel & Tour Impact. Ny toekarem-pizahan-tany any Bogotá dia maneho ny 29.1% amin'ny hetsika fizahan-tany any Kolombia.
Amerika Latina Travel Travel & Impact Impact dia iray amin'ireo andiana tatitra nataon'ny WTTC izay mijery ny fandraisan'anjaran'ny Travel & fizahan-tany ho an'ny toekarena sy ny famoronana asa. Mandrakotra tanàna 65 ny fanadihadiana, ka ny enina amin'ireo dia any Amerika Latina.
Ny fandaniana iraisam-pirenena dia mitentina 41% amin'ny vola miditra amin'ny fizahan-tany an'i Bogotá, manasongadina ny maha-zava-dehibe ny mpitsidika iraisam-pirenena ho an'ny tanàna. Ny ankamaroan'ny dia dia natao ho an'ny fialamboly fa tsy tanjon'ny orinasa. Ny tsena iraisam-pirenena ambony dia Etazonia (27%), Mexico (10%), Espana (5%), Brezila (5%) ary Arzantina (4%). Ny fangatahana ao an-trano dia mbola tompon'andraikitra amin'ny 59% amin'ny vola miditra amin'ny fizahan-tany, ary ny fandaniana amin'ny fahatongavan'i Kolombia dia tombanana hitombo avo roa heny amin'ny 2026.
Ny totalin'ny anjara birikin'ny sehatry ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Kolombia amin'ny CODP dia COP51,05bn (16.7 Dolara amerikana), na 5.8% amin'ny harin-karena faobe. Ny totalin'ny fandraisana anjaran'ny Travel & fizahan-tany amin'ny asa, ao anatin'izany ny asa notohanan'ny indostria, dia 6.1% amin'ny asa manontolo (asa 1.3 tapitrisa). Mandritra ny folo taona manaraka dia vinavinaina hamokatra asa 219,500 XNUMX io sehatra io.
Momba ny WTTC: ny World Travel & Tourism Council dia manampahefana manerantany amin'ny fandraisana anjara ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny Travel & fizahan-tany. Mampiroborobo ny fitomboana maharitra ho an'io sehatra io, miara-miasa amin'ny governemanta sy ny andrim-panjakana iraisam-pirenena hamoronana asa, hitondra ny fanondranana ary hiteraka fanambinana. Isan-taona ny WTTC, miaraka amin'ny Oxford Economics, dia mamoaka ny tatitra momba ny toekarena misy ny toekarena, izay mijery ny tombony ara-tsosialy amin'ny Travel & fizahan-tany eo amin'ny sehatra manerantany, isam-paritra ary ny firenena. Tamin'ity taona ity ny tatitra dia mampiseho angon-drakitra momba ny vondrona isam-paritra 25 sy firenena 185.
Travel & fizahan-tany dia mpamily fototra amin'ny fampitomboana ny vola sy ny toekarena manerantany. Ny sehatrasa dia mandray anjara US $ 7.6 trillion na 10.2% amin'ny harin-karena faobe (GDP) manerantany, raha vantany vao raisina avokoa ny fiatraikany mivantana, tsy mivantana ary ampidirina. Io sehatra io dia mitaky asa 292 tapitrisa na iray amin'ny folo amin'ireo asa rehetra eto ambonin'ny planeta.
Nandritra ny 25 taona mahery, WTTC no feon'ity orinasa ity manerantany. Ny mpikambana dia ny seza, filoham-pirenena ary lehiben'ny mpanatanteraka eo amin'ny sehatry ny Travel sy fizahan-tany tsy miankina eto an-tany, izay mitondra fahalalana manokana hitarika ny politikan'ny governemanta sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ary hampahafantatra ny maha-zava-dehibe an'io sehatra io.
Ny vovonan'ny Global WTTC isan-taona dia namory solontena 900 mahery hifanakalo hevitra momba ny fotoana mety sy ny fanamby ary ny olana atrehin'ity indostria ity, fa ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ho an'ny rahampitso kosa dia manaiky ny herin'ny indostria ho hery miorina amin'ny faharetana. Ny fihaonana an-tampony dia hatao ao Buenos Aires, Arzantina, 18 -19 aprily 2018.
Santiago dia manome ny antsasaky ny fizahan-tany any Chile
VistaJet dia mahatratra ny vola miditra Q3 avo indrindra amin'ny tantarany